Siyaasi Qurbaawi '' Puntland Yube Gardarey uga Qaylin' Daawo
Friday March 15, 2019 - 23:06:46 in Wararka by Super Admin
Siyaasi Siciid Cali Axmed Qurbaawi oo Waraysi gaar ah sinayeey Caawa Warbaahinta daljir ayaa ka hadlay xisada ka tagan gobalka sanaag iyo qabsashadda Ciidamadda Somaliland ee Yube.
Qurbaawi ayaa ugu horeyn Waraysiga kaga hadlay Ciidamo ka tirsan Kuwa somaliland oo uu sheegay inay isbaaro u taal oo ayba maamulaan Caasimadda Gobalka Sanaag ee Badhan,wuxuna sheegay in halkas labada dhinac ee Puntland saraakisha Puntland iyo somaliland ay kuwadda suganyihiin.
Dhinaca kale wuxu sheegay Guddoomiyaha Gobalka Sanaag Maxamuud Ciyoon in uusan ka hadlin Ciidamadda Badhan jooga balse uu ka hadlay qabsashadda Somaliland ee Yube,isago tilmaamay in Guddoomiyihu marka horre uu ka hadlo xaaladda Badhan.
Joogitaanka Col.Caare ayuu saluugay isago sheegay in loo bahanyahay in caare uu Puntland isaga baxo maadama uu yahay Somalilander,kaliya ay is hayaan Muuse Biixi.
Hadal shalay kasoo yeeray Afhayeenka Issimadda Puntland Garaad Cabdulaahi Cali ciid ayuu ku tilmaamay wax laga xumaado isla markaana uu Raaligalin ka siinayo shacabka Yube.
Gobalka Sanaag Beelaha ku dhaqan qaarkood ayuu sheegay inay ka qatanyihiin Saamiga ay ku leeyihiin Puntland siiba dhinaca Barlamaanka oo uu sheegay in xubin qura oo aysan matalin.
Ugu dambeyn Siciid Cali Axmed wuxuu ugu baaqay Madaxweynaha Dowladda Puntland in dadka degaanka siiba Gobalka sanaag inuu u keeno qorsha cad oo u ku maamulayo isla markaana gobalka siyaasad cad u dajiyo.
Wariye Maxamed Lakiman ayuu Khadka Taleefanka Ugu waramay isago maraykanka jooga.